Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Conor Gallagher Child Story Plus Ihe Na -adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Conor Gallagher Biography na -agwa gị eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, nne na nna (Samantha na Lee), ezinụlọ, ụmụnne (Dan, Jake na Josh). Karịa nke ahụ, enyi nwanyị Gallagher/nwunye ga -abụ (Aine May Kennedy), Ndụ, Ndụ Onwe Onye na Uru Net.
Na nkenke, Lifebogger na -ewetara akụkọ onye na -eme egwuregwu nke obi ike na ọchịchọ ya ịga nke ọma mere ka ọ merie ajọ ọrịa obi arrhythmias. Anyị na -amalite Memoir nke Con site n'oge ọ bụ nwata - ruo mgbe ọ nwetara ama n'egwuregwu mara mma.
Iji kpalie agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị - etu Conor Gallagher Biography ga -esi tinye aka, anyị ewepụtala nchịkọta foto nke ndụ ya. Lee bụ ntorobịa ndị egwuregwu bọọlụ bekee ruo ebe ngosi nka nke na -akọwa njem njem ya.
Conor Gallagher Biography - Lee ndụ nwata ya na akụkọ ịga nke ọma.
Ee, onye ọ bụla maara na bọọlụ Con dị mma ka ọ mara mma. N'ezie, ọdịdị igbe ya na igbe na-achọ ikpuchi ọtụtụ ahịhịa n'ime oghere na-echetara akụkọ akụkọ Chelsea abụọ. Ndị a bụ Michael Essien na Ballack.
N'agbanyeghị nsọpụrụ nke ndị egwu kpọrọ ya, anyị na -achọpụta na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ akwụkwọ akụkọ Conor Gallagher. Anyị ewepụtala oge iji kwadebe ya - maka na anyị hụrụ egwuregwu bọọlụ n'anya dịka gị. Ugbu a, n'atụghị egwu, ka anyị gaa n'ihu na akụkọ ihe mere eme nke onye ọkpọ egwuregwu.
Conor Gallagher Akụkọ nwata:
A mụrụ Conor John Gallagher n'ụbọchị 6th nke February 2000 nne ya, Samantha Gallagher na nna, Lee Gallagher, n'obodo Epsom, ndịda etiti London.
Ọkachamara ndị egwuregwu bọọlụ bịara n'ụwa dịka nwa ikpeazụ n'ime ezinụlọ nke nwere ọnụ ọgụgụ ụmụ nwoke. Samantha (nne ya) bụ naanị nwanyị nọ n'ụlọ nwoke.
Conor Gallagher bụ otu n'ime ụmụnne anọ (Dan, Jake na Josh) na -enweghị nwanne (s) - niile sitere na njikọ dị n'etiti nne ya na papa ya.
Mgbe ọ bụ obere nwa, nne na nna Conor Gallagher - Samantha na Lee - kụziiri ya mkpa ọ dị iso ndị nnukwu ụmụnne ya nwee mmekọrịta chiri anya. Obi dị m ụtọ na njikọ njikọ nwanne ahụ dị n'etiti Conor, Dan, Jake na Josh chebere ọdịnihu ezinụlọ.
Ọ dị mkpa ime ka ị mara na ụmụnne abụọ nke Conor (Josh na Jake) n'aka nri nke foto a bụ ejima. Ha dị afọ asaa karịa Conor. Dan, onye esere ese na aka ekpe, bụ ọkpara nke ezinụlọ Gallagher.
Ndị a bụ Conor Gallagher Brothers - onye ya na ya tolitere.
The obere jimnazum:
Mgbe ọ bụ nwata, a hụrụ Conor dị ka asọmpi oge niile. N'oge niile, nwata nwoke ahụ chọrọ izute ikike na ike nwanne ya nwoke nke tọrọ ya. Conor maara na ịbụ onye ikpeazụ a mụrụ n'ezinụlọ ya ekwesịghị ịmachi ya. N'ihi ya, ọ tụghị egwu - n'ịchọ ihe ọhụrụ.
N'oge ahụ, nne na nna Conor Gallagher ga -akwado ya na ụmụnne ya ka ha pụọ ​​gwuo egwu n'èzí - ọkachasị na trampoline ụmụaka. Dan, Jake, na Josh ji ntakịrị ụjọ na -eme egwuregwu ha n'uche Lee na Samantha (papa ha na nne ha). Okwu Conor bụ ihe ọzọ.
N'oge ahụ, ị ​​ga -enwerịrị Conor ịkpachara anya ma ọ bụrụ na itinye nwa nwoke ahụ na trampoline nwata ahụ. Nke a bụ n'ihi na onye egwuregwu bọọlụ bekee na -eme ụdị azụ azụ niile. N'ihi ikike egwuregwu ya, ndị òtù ezinụlọ na -eche na ọ ga -amalite mgbatị ahụ dị ka ọrụ.
Mmasị na -asọ mpi ma na -eso nzọụkwụ Nwanna:
Kama ịmalite ọrụ ahụ, nwata ahụ nwere mmasị naanị na otu ihe - ịgbaso nzọụkwụ ụmụnne ya ndị okenye. Ná mmalite, ụmụnne niile nke Conor weere egwuregwu bọọlụ wee nabata ebumnobi asọmpi nwanne ha nwoke ka ọ ka mma.
Ụmụnna Gallagher gbara bọọlụ n'ọhịa dị nso na azụ ụlọ ezinụlọ ha na Great Bookham. Boysmụ nwoke niile nwere nrọ na ekele maka mkpebi ha, Dan, Jake, Josh na Conor niile enweela ọganiihu na football.
Zute ụmụ nwoke anọ Lee na Samantha Gallagher - Dan, Jake, Josh na Conor.
Ezinụlọ Ezinaụlọ Conor Gallagher:
A na-etokarị Lee Gallagher, nna na onye isi ezinụlọ dịka ogidi na mmepe na ọdịmma mmetụta nke ụmụ ya. Ee, Ezinaụlọ Conor Gallagher abụghị ụdị ọgaranya, mana ha biri ma mee nke ọma dịka ụmụ amaala Britain.
Anyị na -ese Lee Gallagher ka ya na ụmụ ya (Dan, Jake na Josh) jikọtara - tupu amụọ Conor.
Otu ihe dị oke mkpa gbasara ezinụlọ Conor Gallagher bụ eziokwu na ha niile bụ ndị na -akwado Chelsea - ewezuga Dan (nwa nwoke mbụ nke Lee na Samantha). Maka Bad na -emeri ọtụtụ votu, ọ bụghị ihe ijuanya na anyị maara na Conor nwere akụkọ na klọb.
N'ihi ịhụnanya ezinụlọ nwere maka klọb bọọlụ Chelsea, nne na nna Conor Gallagher kpebiri ibi na Epsom - nke dị nso na Cobham. Ọ bụrụ na ị nwere ike icheta, ebe a bụ ebe ọzụzụ klọb bọọlụ Chelsea, ọ dịkwa nkeji 34 ọzọ site na Stamford Bridge pụrụ ime ihe niile.
Ezinụlọ Conor Gallagher bi nso na Cobham - ụlọ ọrụ ọzụzụ Chelsea FC. Ọ dị nkeji 34 site na Stamford Bridge.
Ụbọchị ndị a, Conor na -enweta mmetụta a na -enweghị atụ nke nostalgia mgbe ọ bụla ọ na -abanye n'ogige ntụrụndụ Painshill nke Cobham. Nke a bụ ebe bọọlụ mere ya, ebe ọ tolitere na nrọ ahụ kwa ụbọchị nke chọrọ ịbụ ọkaibe n'ịgba bọọlụ.
Nke na -adọrọ mmasị karị, ogige Painshill nke Cobham bụ ebe Conor lere kpakpando Chelsea anya - ka ha na -anya ụgbọ ala ha mara mma ịzụ. N'adịghị ka ndị enyi bi ebe dị anya, ihu nke Akụkọ Ifo dị ka Frank Lampard, Didier Drogba, Michael Essien, Salomon Kalou wdg, abụghị ihe ọhụrụ nye ya.
Mmalite ezinụlọ Conor Gallagher:
Anyị niile maara na ọ bụ onye egwuregwu bọọlụ Bekee nke mba Britain. Site n'echiche agbụrụ, Conor Gallagher bụ onye agbụrụ White British. Nke a bụ 81.88% nke ọnụ ọgụgụ ndị United Kingdom.
Ebe ezinụlọ Conor Gallagher bi (Epsom) bụ isi obodo, ndịda etiti London. Laa azụ na narị afọ nke 10, ndị mmadụ kpọrọ obodo Ebesham a. Aha Epsom sitere na onye nwe ala Saxon.
Maapụ a na -akọwa mmalite Conor Gallagher.
Ezinaụlọ Conor Gallagher (Epsom) bụ onye ama ama maka ụlọ elu elekere, High Street, nnukwu egwuregwu egwuregwu, ebe ofufe, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, ogige na ọtụtụ oghere. Ibi ebe ahụ dị egwu ma anyị nwere ike ịgwa gị na ezinụlọ Conor ji obodo a mee ihe.
Nke a bụ ka Epsom dị - ebe onye egwuregwu bọọlụ Bekee toro.
Dị ka weebụsaịtị WestBrom si kwuo, enwere ihe nketa ezinụlọ Conor Gallagher. Site na nne na nna ya ochie (ma ọ bụ Lee ma ọ bụ Samantha) enwere akara nke usoro ọmụmụ ya - sitere na mba abụọ - Scotland ma ọ bụ Republic of Ireland.
Mmụta Conor Gallagher:
Ndị nne na nna egwuregwu bọọlụ Bekee - Samantha na Lee - site na mbido, mere ka ụmụ ha nwee ntọala agụmakwụkwọ dị mma. Dị ka nyocha anyị si kwuo, Conor Gallagher gara Howard nke Effingham School, na Leatherhead, England.
Howard nke Effingham bụ ụlọ akwụkwọ Conor Gallagher gara.
Ụmụnna Gallagher niile ga -aga ụlọ akwụkwọ gara ụlọ akwụkwọ a. Maka nne na nna ha, mkpa ọ dị ka ụmụ ha biri onwe ha ma nwee ndakpọ azụ bụ isi ihe mere ha ji nye ohere ka ha nweta ezi mmụta.
Ọzọkwa iburu n'uche, Howard nke Effingham-ụlọ akwụkwọ Conor Gallagher na ụmụnne ya nwoke-dị ihe dịka nkeji iri abụọ na atọ site n'ụlọ ezinụlọ ha na Epsom.
Conor Gallagher Football Akụkọ:
Dị ka nne na nna kwesịrị n ,omi, Samantha na Lee amanyeghị ụmụ ha ime egwuregwu ọ bụla. E kwere ka Conor na ụmụnne ya mee ọtụtụ ihe mgbe anyị bụ nwata - dị ka rugby, football, tennis na karate. Ụmụ nwoke ahụ na -aga nnọkọ egwuregwu maka ụmụaka.
N'ime egwuregwu a kpọtụrụ aha n'elu, bọọlụ wee biri. Nke a bụ otu ndị mmadụ hụrụ ka ha na -egwu egwu. N'ezie, onye ọ bụla nọ na mpaghara ogige ogige nke Cobham nke Painshill kwuru na ụmụnne Gallagher maara egwuregwu bọọlụ nke ọma.
Ọ na -amasị ndị mmadụ mgbe niile mgbe Josh, Jake, Dan ma ọ bụ Conor, na -egwu otu egwuregwu - dịka ha hụrụ na ha nwere ezigbo agụụ maka egwuregwu bọọlụ. N'oge na -adịghị anya, ụmụ nwoke niile chepụtara echiche mara mma nke ịbụ ndị egwuregwu ịgba bọọlụ.
Conor Gallagher Oge Ndụ na Football:
Maka nwatakịrị ahụ, enweghị agụụ egwuregwu na -abụghị egwuregwu ahụ mara mma. N'ihi ya, ọ dị mkpa ịnwale Epsom Eagles - ụlọ akwụkwọ kacha mma maka ndị mbido, nke dị nso n'ụlọ ezinụlọ ya.
Mgbe ọ dị afọ asatọ, nne na nna Conor Gallagher kwadoro ya ka ya na klọb ezinụlọ ha nwee ọnwụnwa - Chelsea. Lee, nwata nwere oke mmụọ - n'oge ọ sonyeere Bad (afọ 2008).
Nke a bụ Conor Gallagher n'oge ọ bụ nwata. A na-ese onyinyo ya na-abịanye aka na nkwekọrịta ụlọ akwụkwọ Chelsea mbụ ya dị ka 8 afọ.
Little Conor nwetara nkwado dị ukwuu site n'aka nne na nna ya na ụmụnne ya ndị okenye ndị ọzọ iji jigide ntinye aka ya na agụmakwụkwọ. O tolite na mpaghara ahụ nyekwaara ya aka, ebe ihe niile dị ka ụlọ ya.
Ọ ga -amasị gị ịmara na ụmụ ejima Conor Gallagher (Josh na Jake) nwetara ebe na agụmakwụkwọ Fulham - n'oge ọ sonyere na Bad. N'aka nke ọzọ, Dan nwere aha ịga nke ọma na AFC Wimbledon.
N'oge mmalite na Chelsea, Conor malitere dị ka onye ọkpọ tupu ọ gbanwee gaa na etiti etiti. N'oge mgbanwe, bọọlụ Conor ghọrọ ihe siri ike.
Ndị otu egwuregwu ama ama:
Otu ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Chelsea nwere kpakpando ama ama - ọtụtụ n'ime ha emeela onwe ha aha n'egwuregwu bọọlụ. Ndị otu egwuregwu Conor Gallagher gụnyere aha ndị ama ama dịka Reece James (aka nri-azụ), Marc Guehi (etiti azụ) na Rhian Brewster (n'ihu).
Conor Gallagher nọ n'etiti. Ị nwere ike ịgwa m ndị otu egwuregwu abụọ n'akụkụ ya?
Maka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Chelsea ya, a na -ahụta ya dị ka otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ kacha mma. Conor bụ onye na-egwu egwu miri emi nke na-adịrị ya mfe iji ohere na-enye aka. Maka onye na -eto eto na -etolite, ihe na -akawanye mma - ka ahụrụ na vidiyo a.
Conor Gallagher Biography - Ụzọ ama ama Akụkọ:
N'agbata afọ itoolu na iri na abụọ, ụlọ akwụkwọ mmuta nke Chelsea tinyere nwata ahụ n'okpuru ọzụzụ ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ. N'ihi nke ahụ, Gallagher mere nnukwu ndozi. Mana ọ maghị na ọ na -etinye ọtụtụ nrụgide n'ahụ ya.
Conor Gallagher Nsogbu Obi:
Onye ọkpọ egwuregwu ahụ zutere ihe a na -atụghị anya ya - obere oge tupu ọ gụchaa agụmakwụkwọ Blues. Nke mbụ, ọ bụ nnukwu mmerụ ikpere a ka o meriri. Nke kachasị njọ bụ n'afọ 2018. N'afọ ahụ, Conor Gallagher nwere nsogbu obi - nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwarụ ọrụ ya.
Ọ bụ ahụmịhe dị egwu dịka Conor enweghị ike ịzụ. Ọtụtụ, nwa ogbenye na -eku ume. Enweghị ụzọ ọzọ maka Conor iji gaa n'ihu na -agba bọọlụ, naanị ụzọ ọ ga -esi pụta bụ ịwa ahụ.
Iji dozie ihe ndị ọkachamara ahụike kpọrọ ọrịa obi arrhythmias, Conor nwere ịwa ahụ obi nkeji iri anọ na ise. Ebe nne na nna ya na ndị ezinụlọ ya kwụ ya n'akụkụ, nwata ahụ gbakere wee laghachi ime ihe ọ hụrụ n'anya.
Iweghachite mgbe ọ gbasịrị - Nsogbu obi:
N'ịbụ onye na -agbasi ike, Conor Gallagher gara n'ụzọ niile iji chịkwaa egwuregwu ahụ. Site n'ọhụụ ya, ịkọwapụta n'ụzọ ziri ezi, ngagharị bọọlụ na echiche ọnọdụ, Chelsea FC enweghị nhọrọ - mana inye ya dịka onye ọkpụkpọ afọ 2018/2019 ha.
Vidio nke emume nrite bụ ihe akaebe na Conor dị njikere maka ịgba bọọlụ. Ọ na -agbakwa akaebe na hype gbara ya gburugburu n'oge ahụ dị adị. Lelee oge ahụ dị ịtụnanya o nwetara nturu ugo - nke ji agụmakwụkwọ wee bịa.
Dị ka ụgwọ ọrụ maka ịrụsi ọrụ ike ya, klọb bọọlụ Chelsea nyere Conor nkwekọrịta ọkachamara. Ahụmịhe ahụ mara mma ịhụ ka onye ọkpọ egwuregwu mere ka ụbọchị ahụ zuo oke - site na biputere foto nke ọkachamara ọkachamara bịanyere aka n'ahịrị na ụbọchị mbụ ya na klọb ahụ.
Conor Gallagher bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ọkachamara ya. Ijikọta foto a na -egosi na nrọ na -emezu.
England U-17 World Cup na Chelsea U-18 Glory:
Ihe omume ya na Chelsea nwetara Conor oku ntorobịa England maka U17 World Cup. Kpakpando ndị ama ama na ndị otu Bekee gụnyere ihe masịrị ya Phil Foden (Man City), Callum Hudson-Odoi (Chelsea) Emile smith rowe (Arsenal) na Jadon Sancho (Obodo obodo), wdg.
England meriri Brazil ka ha banye n'agba ikpeazụ ebe ha na -agbagha otu ndị Spain nwere kpakpando dịka Ferran Torres (Valencia), Eric Garcia (Manchester City). Ha na England adabaghị ka ndị Spain meriri 5-2-ịhụ ka kpakpando Lions atọ na-abịa n'ihu na-ebuli iko ahụ.
Oge sochirinụ, Gallagher ghọrọ onye otu dị mkpa na klọb bọọlụ Chelsea kacha nwee mmeri U18s nke gara n'ihu merie iko anọ. Cheta Tariq Lamptey? .. ọ so na ndị mmeri nke quadripole. Ọzọkwa, iko ndị a bịara n'otu oge n'okpuru Morris.
Conor Gallagher bụ otu n'ime ndị otu U18 na -eme nke ọma na akụkọ Chelsea.
Njem mgbazinye ego:
N'etiti 2019, Chelsea zigara nwa agbọghọ Conor na mbinye ego - na Charlton Athletic. N'adịghị ka nne na nna ya na ụmụnne ya, ihe kacha sie ike ịhapụ Chelsea bụ ụmụ nwoke ya na ha na -egwuri egwu kemgbe ọ bụ nwata. Conor kwuru okwu mmetụta uche na vidiyo a.
Ọ bụ nkwenye siri ike na kpakpando agụmakwụkwọ Chelsea ndị na -agbazinye ego na -apụta nke ọma mgbe niile. Mmasị nke Trevoh Chalobah (Lorient), Tammy Abraham (Aston Villa), Nkume Mason (Derby), Nsogbu Thorgan (Zulte Waregem), Egwuregwu Tomori etc nwere ike gbaa akaebe nke a.
Na Charlton Athletic, Conor Gallagher ghọrọ onye ọ bụla hụrụ n'anya nke ukwuu. Naanị egwuregwu ole na ole n'ime ya, ndị egwu klọb edeworị abụ maka aha ya. Ugbu a, lelee Conor Gallagher ka ọ na -abụ abụ Charlton Athletic mere ya. Ọ bụghị egwu egwu, ọ bụ ya?
Conor Gallagher Biography - Akụkọ ịga nke ọma:
Ọkwa ọkwa nke abụọ nke England (Championship) na-erukarị ngwụcha mgbe ndị otu na-eche ihu. N'ikwu nke a, ọ bụ mmalite mmalite maka ndị gụsịrị akwụkwọ na mahadum sitere na klọb Premier League kachasị elu. Dị ka a tụrụ anya ya, Gallagher nwere ike iguzogide okpomọkụ nke Championship.
Dị ka ọtụtụ ndị gụchara akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ, ndị egwuregwu merela okenye na -emegbu ya. Ịlanahụ ngalaba nke abụọ nke Bekee ghọrọ usoro mmụta maka ya. N'ikpeazụ, Conor ghọrọ mmeri, maka enyemaka na ihe mgbaru ọsọ ya. Lelee ka esi emegbu ya wee bilie hụ ihe ịga nke ọma.
Dị ka ụzọ isi akwụghachi ọrụ ike nke onye na -eto eto, njikwa nke Asọmpi Bekee gọziri Gallagher. Ọ meriri nturuugo ndị ntorobịa bọọlụ nke Bekee Football League maka August 2019.
Njem mmeri nke Conor Gallagher. Ọ bịara, hụ wee merie.
Akụkọ ihe ịga nke ọma Swansea:
Site na omimi nke obi ha, Charlton Athletic nwere ekele maka Chelsea maka iweta otu n'ime ụmụaka ha nwere nkà ka ọ kpọọ ha.
Na 14 Jenụwarị 2020, klọb London chetara Conor - na nke ọzọ iji mee ka ya na ndị otu mbụ zụọ wee wepụta ya ọzọ na mbinye ego na Swansea. Nke a bụ vidiyo mmetụta uche nke Conor na -ahapụ Chalton ọ hụrụ n'anya.
Nkwekọrịta isonyere Swansea mere na 15th nke Jenụwarị 2020-obere oge tupu mkpọchi COVID-19. Nke a bụ oge mbụ Conor hapụrụ ezinụlọ ya na mba ọzọ - Wales. Na -ekpe ikpe site na vidiyo a, ọ dị ka nwata ahụ na Swansea nwere nnukwu ọ.
Akụkọ mmeri nke Premier League:
Gallagher gwara Chelsea Media n'otu oge na oge ya na Swansea nyere ya ohere ka ọ bụrụ onye okike karịa ndị egwuregwu bọọlụ. Ekele maka nke ahụ, o mechara mezuo ebumnuche nke ịsọ mpi na Premier League.
Na mbido, Conor Gallagher họọrọ ịnọ nso na ezinụlọ ya na London, na -ekwusi ike ka ya na Crystal Palace nweta ahụike. Mgbanwe obi site na klọb South London hụrụ ka ha na -anabata Michy Batshuayi kama Conor.
Omume nke Crystal Palace mere nyere Bilic ohere ịgakwuru onye otu egwuregwu West Ham ya mbụ (Frank Lampard) - onye bụbu onye nkuzi Chelsea n'oge ahụ. Nke ahụ nyere aka mee ka mbinye ego Conor Gallagher kwaga The Hawthorns.
N'ụbọchị a - 28th nke Nọvemba 2020, Gallagher kụrụ ihe dị mkpa na ọrụ ya. Maka ọ joyụ nke ezinụlọ Conor Gallagher, nwa ha nwoke gbara ihe mgbaru ọsọ mbụ nke mbụ ya. Lee, akụkụ ọ bụla nke ihe mgbaru ọsọ dị anya dị ịtụnanya.
Akụkọ ịga nke ọma nke Crystal Palace:
N'ịgbaso usoro ịgbazinye ego na Baggies, Gallagher na July 2021- sonyeere Eagles na nkwekọrịta mbinye ego otu afọ. Ọ tolitere n'ike ruo n'ike n'otu ndị mejupụtara aha dị mma dịka Zaha, Odsonne Edouard, Jean-Philippe Mateta, Joachim Andersen na Eberechi Eze.
N'oge a na -eke Conor Gallagher Biography, ọ bụ ugbu a ike ịtụle - dị ka etiti Crystal Palace dị. Ibu ihe mgbaru ọsọ abụọ megide Westham na inye enyemaka mmeri megide Spurs na-egosi na Conor erutela n'ọkwa ọzọ.
Obi abụọ adịghị ya, Gallagher dị njikere n'ezie maka ndị otu Chelsea mbụ. O ruru eru ugbu a ịsọ mpi na ihe ndị masịrị ya Mateo Kovacic na Nkume Mason - maka mmalite ya na ndị otu ndị isi Blues. Ịkpọ maka Chelsea na -anọgide na -abụ nrọ, dịka e kwuru HERE.
Ee, ọnụego ọrụ nwata nwoke a abụghị ihe ezi uche dị na ya, hype gbara ya gburugburu ka dịkwa adị. Dị nnọọ ka Billy Gilmour, Conor kwesịrị ka a nwalee ya na ndị otu ndị otu Chelsea. Ọ bụ naanị oge tupu Thomas Tuchel na -akwado nke ahụ. Ndị ọzọ, dị ka anyị na -ekwu maka akụkọ ndụ ya, bụ akụkọ ihe mere eme.
Nwanyị nwanyị Conor Gallagher:
Aha ya bụ Aine May Kennedy. Ọ bụ ịhụnanya nke ndụ Conor.
Aine May Kennedy bụ aha ya, ndị egwu na -akpọkarị ya nwunye Conor Gallagher ka ọ bụrụ. N'ịtụle anya ya, ị nwere ike ịkọ ihe ọ na -eme maka ọrụ aka. Aine May bụ Onye Nlereanya, edekwara m Bio a, ya na Pulse, ụlọ ọrụ na -eme ngosi na Liverpool, England na -arụ ọrụ.
Aine May Kennedy bụ ọmarịcha mara mma nke na -atụkwasị obi na nke ọ bụla n'ime ụdị ihe nlereanya ya.
Ọ nwere ike ịmasị gị ịmara na enyi nwanyị Gallagher bụ onye Irish ọ bụghị onye England. Kedu ihe nke a pụtara?… Ugbu a, ka anyị kọọrọ gị akụkọ gbasara mkpakọrịta nwoke na nwaanyị.
Aine May na Gallagher malitere ịlụ onwe ha ụbọchị ole na ole ka ekeresimesi gasịrị - na 27th nke Disemba 2018. Kemgbe ahụ, ịhụnanya ha nwere maka ibe ha na -esiwanye ike. N'ikwu eziokwu, ikekwe ị gaghị ahụ mmadụ abụọ dị oke egwu karịa Conor na Mee.
Aine May na Conor Gallagher abụghị naanị ndị hụrụ n'anya, kamakwa ezigbo ndị enyi.
Nnwale mkpọpụta okwu - Gallagher dara:
Na -akwado ịbụ ihe nlereanya, Aine May na -enweta oge iji mee ndị na -akwado ya obi ụtọ site na ọwa YouTube ya. Na vidiyo a, o gosipụtara na ezinụlọ Irish dị na ya wee nye enyi ya nwoke ọrụ ịkpọpụta herculean.
Conor nwere ike ịdị mma na egwuregwu bọọlụ… mana ọ dị oke egwu n'ịkpọ okwu ụfọdụ. Ugbu a kirie vidiyo na -atọ ọchị nke ndị hụrụ abụọ a n'anya.
Otu ihe doro anya na mmekọrịta ha. Ọ bụ eziokwu na ịhụnanya ha nwere maka ibe ha bụ nke ezigbo ya. Eziokwu ahụ bụ na Aine May na Conor Gallagher na -akpa kemgbe nwa oge na -eme ka a ghara inwe obi abụọ na agbamakwụkwọ nwere ike ịbụ usoro iwu ọzọ.
Hà nwere ike ịdị ka nke a n'ụbọchị agbamakwụkwọ ha?… Aine May na Conor Gallagher ga -adịrị ibe ha.
Ndụ Conor Gallagher:
Isoro Aine May gaa ezumike - ọkachasị n'akụkụ oke osimiri Portuguese nke dị anya na -akpalite ncheta doro anya nke na -ebuli ọnọdụ ya. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Conor Gallagher na -ebi ndụ dị mma. Kirie ihe onyonyo a ka ị ghọta ihe kacha amasị di na nwunye maka ezumike.
Ụgbọ ala ọ na -anya:
N'ihe gbasara nkasi obi, ọkachasị n'oge njegharị eji megharịa ọnụ, Conor Gallagher na-ahọrọ ụgbọ ala eletrik Desert Buggy High-Speed ​​4 × 4. Dị ka a hụrụ ebe a, ụgbọ ala a nwere aha ọma dị ka ihe na-emebi emebi n'okporo ụzọ.
Conor Gallagher na -anya ụgbọ ala ọzara kachasị amasị ya.
Na ndụ ezumike, Conor Gallagher nwekwara ịhụnanya miri emi maka ụgbọ ala ndị ọzọ - ọkachasị Land Rover Range Rover Evoque. Ọ zụtara ụgbọ ala ahụ dị ka onyinye ekeresimesi ka nwunye ya bụrụ - Aine May Kennedy.
Mgbe ọ natara ụgbọ ala nrọ ya na 24th nke Disemba 2020, Aine May nwere ekele maka Conor - gụnyere nne ya na papa ya.
Ndụ Onwe Onye nke Conor Gallagher:
Bọọlụ enwetala kpakpando kachasị mma, nke a bụ otu ihe kpatara egwuregwu ahụ ji adọta ndị na -ekiri ya. Agbanyeghị Jack Grealish na David Beckham mara mma, Conor Gallagher nọ na klaasị nke ya.
Ndụ Onwe Onye nke Conor Gallagher.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ anụmanụ anyị chere nwere ike ịtọ ụtọ, ha nwekwara ike dị ize ndụ. Conor nwere mmasị iso ndị Giraffes nwee mmekọrịta chiri anya. Mana n'ụbọchị a, omume inye nnukwu enyi ya nri jọgburu onwe ya. Anyị na -atụ anya na Conor si na nke a pụọ ​​n'udo.
Mgbe ị na -enye Giraffe nri adịghị mma. Ahụmahụ Conor Gallagher.
Forhụnanya maka nkịta:
Ka Freddy sonyeere ha, Aine May Kennedy na Conor Gallagher hụrụ onwe ha dịka ezinụlọ zuru oke. Foto dị ebe a, nkịta bụ ezigbo enyi, ọ na -enye ma ndị hụrụ ya n'anya ebumnuche.
Ịhụnanya Conor na Aine nwere ike nye Freddy bụ ihe dị ọcha. Ọ nọnyeere ha mgbe niile n'oge ọtụtụ ọrụ okporo ụzọ na nleta. Vidiyo a na -enyere aka igosipụta ịhụnanya ha nwere maka ya.
Ndụ Ezinụlọ Conor Gallagher:
Maka ndị otu ezi na ụlọ ya, ha ka ga na -ahụ Conor dịka nwa ụlọ. Nke a bụ aha ọchị na -ejikarị akọwa nwa ikpeazụ nke ezinụlọ. Josh Gallagher (nwanne nwanne Conor) kwuru otu oge;
Mama m ka na -asa ahụ Conor mgbe ọ nọ n'ụlọ…
Akụkụ a nke Gallagher's Biography na -ekpughekwu banyere nne na nna ya na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ. N'atụghị egwu ọzọ, ka anyị bido.
Banyere Conor Gallagher Nna:
Anyị maara ya dịka Super-Dad nwere ụmụ nwoke na-agba bọọlụ. Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ mmadụ maara na Lee Gallagher bụbu onye egwuregwu bọọlụ. Agbanyeghị na ọ gbara egwuregwu mara mma (n'ụtụtụ Sọnde, bọọlụ ahịhịa), Lee ejighị ya kpọrọ ihe.
Ọ na -esiri Lee ike ịnagide eziokwu nke ịhụ ọrụ dara ada. N'ihi nke a, Lee siri ụmụ ya ike nke ukwuu site n'ịhụ na ha na-eme ehihie na abalị n'ogige ọkara ezinụlọ ya.
Nke a bụ nkwupụta Josh, nwa ya nwoke;
Nna anyị na -agbaba n'ime anyị mgbe niile - na anyị ga -ebili n'onwe anyị, ọkachasị n'egwuregwu bọọlụ.
Anyị na-enwebu goolu asaa n'akụkụ. Mgbe ahụ. Mgbe ahụ papa m rutere na itoolu n'akụkụ, mgbe Conor nwetara nkwekọrịta ya na Chelsea, ọ tụpụrụ maka ihe mgbaru ọsọ igwe nwere akụkụ 11 n'akụkụ niile.
Banyere Conor Gallagher Nne:
Ndụ anaghị eji akwụkwọ ntuziaka abịa, Samantha abịaghịkwa. Nne nke ụmụ anọ nwere obi ọla edo na ịhụnanya o nwere maka nwa nwoke - Conor - enwebeghị mmekpa ahụ ma ọ bụ jụọ ajụjụ. O guzoro ma hie ụra n'akụkụ Conor n'oge ịwa ahụ obi ya - anaghị ahapụ nwa ya nwoke.
Echetara m ịgwa nne m tupu ịwa ahụ, 'Achọrọ m ime ya ka m nwee ike ịlaghachi ọrụ dịka m nwere ike ọzọ' na nke ahụ bụ ihe mere - Conor kwuru.
Yiri ndị nne nke Kalvin Phillips na Ivan Tony, Samantha Gallagher bụ ụdị onye na -adịghị ezu ike ruo mgbe ụmụ ya ndị na -agba bọọlụ nwere ntụsara ahụ na ndụ na mpụga egwuregwu ahụ. Anyị na -achọpụta - na vidiyo a - n'oge ụbọchị mgbazinye Conor na Swansea. Conor kwuru nke a gbasara mama ya.
Banyere Conor Gallagher Brothers:
Josh, Dan na Jake mere aha nke ha - ebe ha niile ghọrọ ndị egwuregwu ịgba bọọlụ (ndị na -agba bọọlụ). N'ime ụmụnne niile, Dan na Conor nwere ọmarịcha ọrụ ha. Ndị ọzọ na -egwuri egwu n'ụzọ dị mma. Ọzọkwa rịba ama, ha niile echeburu ibe ha ihu.
Josh nwere otu ndị Kọrịnt-Casuals meriri Dan Gallagher AFC Wimbledon n'otu egwuregwu iko FA. Dan's Leatherhead FC echekwara ndị otu Jake ihu - Aldershot. N'ikpeazụ, ndị otu Chelsea n'okpuru-23s Conor emeburu egwuregwu megide Jake's Aldershot.
Onye na -eri nri na onye ikpeazụ mụrụ nke ezinụlọ Gallagher (Conor) ewerela ọnọdụ dị iche - n'adịghị ka ụmụnne ya. Jake, Dan na Josh nọ ugbu a n'oche azụ, na -egwu bọọlụ nke ha ma na -eme nkwado dị ukwuu maka obere nwanne ha site na WhatsApp.
Ugbu a, ka anyị kọọrọ gị ụfọdụ eziokwu gbasara ụmụnna ndị a na -agba bọọlụ;
Ihe gbasara Josh Gallagher:
Ya na nwanne ejima ya (Jake), mejupụtara ụkwụ abụọ nke etiti etiti diamond. N'okwu dị mfe, Josh Gallagher na -arụ ọrụ nke ọma dị ka onye ọkpọ ọkpọ aka nri ma ọ bụ aka ekpe. Josh tọrọ ntọala ọrụ ya na agụmakwụkwọ Fulham. Otu a ka ọ dị maka Jake, ejima ya.
O di nwute, oge Josh na Fulham adịteghị aka, ebe ọ dabara na ịgba bọọlụ. O mechara binye aka na Abbey Rangers na Njikọ Njikọ Njikọ - ọkwa iteghete nke egwuregwu bọọlụ Bekee.
Ka m na -ede akụkọ ndụ a, Josh Gallagher anaghịzi agba bọọlụ na ọkwa ọkachamara. Ugbu a, ọ na -ebi ndụ n'ụlọ akwụkwọ wee na -azụ ahịa ịzụ ahịa nke ya - ọkachasị na mgbede.
Banyere Jake Gallagher:
Otu onye na -akwado Man United, Central midfielder bụ nwanne ejima Josh, ọ bụkwa okenye afọ Conor. Jake Gallagher yiri ka ọ kacha nso Conor na mgbasa ozi Bekee.
Dị ka ụmụnne ya ndị ọzọ, Nnukwu nwanne (Jake) ghọkwara ọkaibe n'ịgba bọọlụ. Ọ malitere ọrụ ya na agụmakwụkwọ Fulham ruo afọ 16.
N'ịga n'ihu mgbe gụsịrị akwụkwọ agụmakwụkwọ, Jake bịanyere aka na ohere mmụta na nkwekọrịta ọkachamara na Millwall. Ọ gbara ebe ahụ tupu ọ kwaga Aldershot Town - ebe ọ chere ihu (Conor's U23 Chelsea) - nwanne ya nwoke nke obere. N'egwuregwu bọọlụ, Jake karịrị ọkaibe.
Zute nwanne nwoke nke okenye Conor Gallagher Jake. N'ime oge a na Aldershot Town - obere oge o zutere nwanne ya.
Banyere Dan Gallagher:
Ọ bụ ọkpara na nwa Samantha na Lee. N'adịghị ka Conor, onye na -egwu egwu na etiti etiti, Dan Gallagher bụ onye na -agbachitere onye na -agbachitere ya. Ọ bụ aka ochie n'ịkọcha ndị mmegide.
Ekele maka usoro ntinye akwụkwọ, Dan Gallagher nwere ọrụ na AFC Wimbledon tupu ọ banye na bọọlụ na-abụghị nke otu. O buru ụzọ gbazinye na Kingstonian, tupu ya na Leatherhead aga ebe na -adịgide adịgide - ebe ọ chere Jake's Aldershot ihu.
Conor Gallagher nwanne nne:
Josh kpughere otu ugboro - site na egwuregwu - na o nweela ha abụọ. Ya na ụmụnne ya nwere mmekọrịta chiri anya na ụmụ nwanne nne ha. Ọ gara n'ihu kpughere na ndị Gallaghers bụ otu nnukwu ezinụlọ - ndị na -emekọ ihe niile ọnụ.
Conor Gallagher Eziokwu efu:
Ịchịkọta akụkọ ndụ anyị, anyị ga-eji ngalaba mmechi a kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara ọkpọ ọkpọ na igbe. Ugbu a, ka anyị bido.
Eziokwu nke 1 - Ọ kpọrọ ịsa efere asị:
Conor Gallagher kpughere otu oge kacha sie ike ịkwaga Wales iji soro Swansea gwuo egwu bụ 'ịmụ ka esi asa ahụ'. Ọ wutere ya n'ezie ịchọpụta na ụlọ ọhụrụ ya enweghị igwe nhicha efere dị mfe. N'ihi nke ahụ, ọ gbasiri mbọ ike na nri esi nri ya.
Mgbe m lọtara ọzụzụ na egwuregwu, ana m agwa onwe m 'Oh mba, m ga -eme efere ọbara ndị ahụ.
A kpuchiri akụkọ banyere mgba nke Conor's Swansea na Sun-UK- gụọ akụkọ zuru oke Ebe ahụ.
Eziokwu #2 - Ọ bụbu onye nche:
Mgbe ọ na -ekwu okwu na mmemme egwuregwu ụbọchị Satọde, Conor kpughere na n'otu oge n'ọrụ ya, ọ kwagara n'ọtụtụ ọnọdụ. Nke mbụ, ọ na-egwuri egwu dị ka onye na-eche nche (naanị otu ugboro), mgbe ahụ na aka nri, aka nri, na n'ikpeazụ, n'etiti etiti. Conor kwuru otu oge banyere ịbụ onye mgbaru ọsọ;
Akpọrọ m bọọlụ maka naanị otu egwuregwu n'ihi na onye mgbaru ọsọ anyị merụrụ ahụ na ọ bịaghị.
Eziokwu #3 - N'ikpeazụ, ọ ghọrọ nwa nwoke Claude Makelele:
Frank Lampard na John Terry bụ ndị dike zuru oke nke Conor na -etolite. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ, Conor Gallagher bịara nso onye ndụmọdụ teknụzụ Chelsea - onye Claude Makelele. Akụkọ mgbe ochie Blues na -elekọta ya ruo taa.
Eziokwu nke 4 - Nkwụsị ụgwọ ọnwa ma e jiri ya tụnyere nkezi nwa amaala England:
Salarygwọ maka onye ọrụ UK oge niile bụ ihe dịka £ 31,500. Site na ọnụ ọgụgụ a, ọ ga-ewe 75 maka onye ọrụ oge niile na UK ịrụpụta ụgwọ ọnwa nke Conor Gallagher. N'okpuru ebe a bụ nkwụsị ụgwọ onye ọkpọ.
Conor Gallagher Ndakpọ ụgwọ ọnwa Chelsea na Pound
Ego a na -enweta kwa afọ: £ 2,363,911
Nweta kwa ọnwa: £ 196,992
Nweta ego kwa izu: £ 45,390
Ego a na -enweta kwa ụbọchị: £ 6,484
Enweta ego kwa elekere: £ 270
Ego a na -enweta na nkeji ọ bụla: £ 11
Nweta ego na sekọnd ọ bụla: £ 0.19
Kemgbe ị malitere ilele Conor Gallagher'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu nke 5 - Okpukpe Conor Gallagher:
Onye egwuregwu bọọlụ ka ga -ekerịta ozi ọ bụla gbasara nkwenye. Agbanyeghị, nne na nna Conor Gallagher mere ya (site na aha etiti - John) na nwanne ya nwoke (Dan AKA Daniel) nwere aha Ndị Kraịst. Nke ahụ na -etinye ntụzịaka anyị na -akwado ya ịbụ Onye Kraịst.
Eziokwu #6 - Profaịlụ Conor Gallagher:
N'ala, o nwere agwa niile nke Central Midfielder nke oge a chọrọ. Agbanyeghị, nke a abụghị ikpe - dịka egosiri na profaịlụ FIFA 2021 ya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla kwesịrị inwe ume 85, ọ bụ n'ezie Conor. Baller dị mma nke ukwuu ịsọ mpi N'Golo Kante.
Tebụl a na -ekpughe ozi dị nkenke gbasara
Aha zuru ezu: Conor John Gallagher kwuru
aha otutu: con
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 6 nke Mach 2000
Age: 21 afọ na ọnwa 9.
Ndị nne na nna: Samantha Gallagher (Nne) na Lee Gallagher (Nna)
Ụmụnne: Dan, Jake na Josh (Bothers) na enweghị nwanne nwanyị
Enyi / Nwunye ka ọ buru: Aha ya bụ Kennedy
Ụmụnne ejima nke ezinụlọ: Jake na Josh
Ezinụlọ Ezinụlọ: England, Scotland na Republic of Ireland
Ebe ọmụmụ: Epsom, England
elu: 1.82 mita (6 ụkwụ 0 sentimita
Ezigbo Net: Nde Nde 3 (2021)
Education: Howard nke ụlọ akwụkwọ Effingham
Onye nnọchite anya: Agencylọ ọrụ njikwa Elite
Conor Gallagher bụ nwa nke ezinụlọ ya na -agba bọọlụ. Ọ bụ ọdụdụ nwa nke ụmụ nwoke anọ nke Lee na Samantha Gallagher. Conor tolitere na ụmụnne nwoke ndị okenye atọ, gụnyere ejima na enweghị nwanne. Na mbido, ụmụnne niile kwere nkwa na ha ga -abụ ndị egwuregwu bọọlụ.
Dị ka ọkachamara ọkachamara na -achọsi ike, ụzọ Conor maka ọrụ ntorobịa na -aga nke ọma abụghị mgbe niile kwụ ọtọ. Nke mbụ, ọ bụ ikpere ya na -eyi egwu ịkwụsị ọganihu ya. Mgbe ahụ, na 2018, mgbe ọ nwesịrị nsogbu obi, nwa nwoke dara ogbenye a wara ya ahụ nkeji iri anọ na ise.
Obi dị m ụtọ na Conor lụrụ ọgụ wee mesịa mewe nke ọma - n'agbanyeghị ejighị n'aka niile bịara ya. Mmeri ahụ maka ọnọdụ obi abịaghị na -enweghị nkwado ndị mụrụ ya (Lee na Samantha) na ụmụnne nwoke ndị okenye (Dan, Jake na Josh).
Yiri ihe Jud Bellingham na Chibuike Nwokocha emeela, anyị tụrụ anya na Gallagher ga -ejupụta n'ike, ịnụ ọkụ n'obi, maka ọdịnihu. Karịsịa n'ọgụ iji merie oku Bekee si Gareth Southgate. Ọ bụghị echefu, ọ tozuru oke igwu egwu Scotland na Ireland.
Daalụ maka itinye oge ka ukwuu n'ịtụle nkọwa nkọwa a nke Conor Gallagher. Na Lifebogger, anyị na -eche maka ịnye izi ezi na izi ezi na akụkọ anyị gbasara Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee.
Biko mee ka anyị mara ozugbo enwere ike ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na -adịghị mma na Memoir Conor. Ị nwere ike ịbịakwute anyị site na iji ụdị kọntaktị Lifebogger. N'aka nke ọzọ, anyị ga -enwe ekele maka ya - ọ bụrụ na itinye okwu ka anyị mara echiche gị gbasara Conor Gallagher.